Tuke 'caaqil ah' oo ka yaabiyay seeynisyahano - BBC News Somali
Tuke 'caaqil ah' oo ka yaabiyay seeynisyahano
30 Juunyo 2018
Eeg sida tukahan u maamulayo qalabkan
Jasiiradda New Caledonia oo ku taala badda Pacific ayaa waxa ay hoy u tahay nooc ka mid ah tukaha oo aad caaqil u ah, kaas oo seynisyahanada ka yaabsaday waxyaabaha uu samaynayo ee aan caadiga ahayn. #
Waxa ay furi karaan xujooyinka ugu adag, iyaga oo xitaa adeegsaday wax u eg maqaalin ama xariga kalluunka lagu jalaabto.
Waxaa loo sameeyay qalabka wax lagu iibiyo, ee lacagta lagu rido, kaas oo si gaar ah loogu naqshadeeyay tukaha, si loo ogaado waxa uu fali doono, balse seynisyahanada ayaa la yaabay sida uu u maamulay , halkaas oo loogu ridey cunto, kadibna marka uu ku rido baakad waxaa usoo dhacaya cuntada.
Shimbirahan ayaa dhawr maalmood la hayay si garaadkooda loo cabbiro, kadibna waa la siidaynayay.
Lahaanshaha sawirka Sarah Jelbert
Image caption Tukaha oo waraaq ku ridaya qalab loo dhexgaliyay cunto
Dr Sarah Jelbert oo ka tirsan jaamacadda Cambridge ayaa sheegay in ay muhiim ahayd in si loo ogaado garaadka tukaha loo sameeyay qalabkan gaar ah, kaas oo ka duwan wax kasta oo ay kula kulmeen adduunka.
Waraaqaha la waaweyneeyay, waana ay gali waayeen godkii loogu talogalay si loo ogaado bal in tukaha uu kala goosanayo, sidiina waa ay dhacday oo cadcad ayuu waraaqda u gooyay si ay meesha ula ekaato.
Image caption Tukaha oo waraaqdii kala jarjaray
Waxyaabaha daraasadda lagu ogaaday waxaa ka mid ah in kaliya tukaha uusan caaqil ahayn, ee sidoo kale in uu yahay mid hal abuur leh, xaaladaha soo wajahana uga bixi karo si xirfadaysan.
Lahaanshaha sawirka James St Clair
Image caption Tukaha oo jilaabanaya